Puntlan oo joojisay wadashaqaynteedii dowladda federaalka - BBC News Somali
Puntlan oo joojisay wadashaqaynteedii dowladda federaalka
Image caption Wasiirka qorshaynta Puntland
Kulan aan caadi ahayn oo golaha wasiirrada ee dawladda Puntland ku yeeshay magaalada Garowe ayaa laga soo saaray in maamulka Puntland uu xiriirkii wada-shaqayn u jaray dawladda federalka Soomaaliya.
Tallaabadaas wuxuu maamulka Puntland sabab uga dhigay arrimo kala duwan oo la xiriira wax uu ku tilmaamay wadashaqayn la’aan uga timi dhinaca dawladda federalka, iyo dawladda federalku la gooni noqotay mashaariicda caalamku ugu deeqay Soomaaliya iyo arrimo kale.
Go’aanka uu maamulka Puntland ka qaatay dawladda federalka Soomaliya oo lagu faafiyay qoraal rasmi ah oo warbaahinta loogu talagalay kaas oo tilmaamay in dawladda Puntland ay si kama dambays ah xiriirkii wada-shaqayn ugu jartay dawladda federalka ee Sh.Shariif hoggaamiyo.
Maamulka Puntland wuxuu sheegay in dawladda federalku aanay wakiil ka noqon karin maamulka Puntland markay noqoto kulamada caalamiga ah ee lagu falanqaynayo arrimaha Soomaaliya.
Baaq hay'adaha dibedda
Xafiiska qaramada midoobay ugu qaybsan arrimaha Siyaasadda Soomaaliya ayuu qoraalku ugu baaqay inuu dib uga fiirsado taageerada uu la garab taagan yahay dawladda federalka ee Soomaaliya oo uu maamulka Puntland ku tilmaamay mid liddi ku ah qaybaha kale ee Soomaaliya.
Warkan ka soo baxay maamulka Puntland wuxuu soo dhoweeyay siyaasadda maraykanku dhowaan soo saaray ee ku aadan sida ay ula macaamilayso dhinacyada Soomaalida iyo in maamulka Puntland uu si gaara ula macaamilayo beesha caalamka markay noqoto arrimaha dib u dhiska iyo dib u heshiinta Soomaalida.
Xilliga dawladda federalka ee haatan jirta oo uu soo qaaday qoraalku wuxuu tilmaamay in maamulka Puntland uu si buuxda uga soo horjeedo in waqtiga loo kordhiyo golayaasha dawladda federlka ee Sh.Shariif hoggaamiyo iyo in dawladda Puntland ay ku baaqayso googol nabadeed iyo dib u heshiineed oo ay fidinayso qaybaha Soomaalida oo dhan.
Maxaa keenay go'aanka Putnland?
Haddaba maxa keenay in maamulka Puntland uu dawladda federalka ka qaato go’aankan. Wasiirka qorshaynta ee Puntland Daa’ud Max’ed Cumar ayaa isagoo warbaahinta la hadlay faahfaahin ka bixiyay arrintaas.
Arrimahan uu maamulka Puntland sababta uga dhigay go’aanka uu ku tallaabsaday maaha kuwo ku cusub dhegaha dadka horay ayaana maamulka looga maqlay eedaymo noocaan oo kale, markaa waxaa is-waydin u baahan waxa waqtigan soo kordhay ee maamulku ku dhaliyay go’aankan adag ee uu ka qaatay dawlad uu qayb ka yahay.
Wararka qaarkood waxay sheegayaan in arrintan ay soo dedejisay ka dib markii maamulka Puntland ay soo gaareen warar sheegaya in madaxwayne Sh.Shariif uu maalintii shalay ku dhawaaqay inuusan ka qayb geli doonin shir ka dhacaya dalka Jabuuti, haddii shirkaas lagu martigeliyo maamulka Puntland.
Wasiirka qorshaynta Puntland Daa’ud Max’ed Cumar ayaa qiray in arrintaasi ay meesha ku jirto isla markaasna ay qayb ka tahay sababaha ku kallifay go’aanka uu maamulka Puntland ka qaatay dawladda federalka.
Dhammaadkii sannadkii aynu soo dhaafnay ayaa maamulka Puntland wuxuu ku dhawaaqay inay ciriiri ku jirto wada-shaqayntii uu la lahaa dawladda federalka ee Soomaaliya taas oo uu sabab uga dhigay madaxda dawladda federalka oo ka gaabisay wada-shaqayntii looga fadhiyay iyo hirgeilnta heshiisyo iyo arrimo kale oo horay loogu ballamay.
Si kastaba ha noqotee, maamulka Puntland wuxuu qayb ka yahay dawladda federalka Soomaaliya, sidaa awgeed xiriirka iyo iskaashiga labada maamul oo xumaada waa mid astaan u noqon kara kala daadsanaanta Soomaalida iyadoo waxa keliya ee laga dhaxlaa ay tahay dhibaatada Soomaalida oo sii daba-dheeraata.